Ka ganacsiga dhuxusha oo laga mamnuucay Magaalada Boosaaso – STAR FM SOMALIA
Maamulka Gobolka Bari, ayaa soo rogay awaamiir lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha, iyadoona ganacsiga dhuxusha si rasmi ihi looga mamnuucay Magaalada Boosaaso iyo Degmooyinka kale ee Gobolkaasi Bari.
Iyadoo horey ay Puntland u mamnuucday ka ganacsiga dhuxusha, ayuu Maamulka Gobolka Bari ku celiyay inaanan deegaanada gobolkaasi la keeni karin wax dhuxul ah.
Gudoomiye Ku Xigeenka Maamulka Gobolka Bari, Axmed Cali C/laahi, ayaa sheegay ku celintooda awaamiirtan inay ka dambeysay, markii illaa sideed gaari oo dhuxul sida ay soo galeen Magaalada Boosaaso.
Gudoomiye Ku Xigeenka, ayaa ganacsatada ku amray inaysan dhuxusha u iib keeni karin suuqyada Gobolka Bari, haddii kalana ay tallaabo ka qaadi doonaan.
Ciidamada ku sugan kontoroolada, ayuu ugu yeeray inay ka hortaggaan gaadiidka dhuxushada soo gelinaya gobolkaasi.
Sababaha loo mamnuucay ka ganacsiga dhuxusha, ayuu ku sheegay abaaraha baahsan ee dalka ka jira iyo inaan loo baahnayn jarista geedaha, si dhuxul looga dhigto.
Axmed Cali C/laahi oo la hadlay Idaacadda Daljir ayaa xusay in dadku isticmaali karaan xaabada qalashay iyo gaaska cunada lagu karsado, maadaama dhuxusha la mamnuucay.
Ciidamada Nabadsugida oo gacanta ku dhigay goob Al-Shabaab u aheyd keydka qaraxyada